Ny tantaranay - Afrikhepri Fondation
Sarintany amin'i Afrika
Vakiteny: 9 min
Lizy razamben'ny hazakazaka mainty dia avy amin'ny planeta Kakongo. Ne Nzala Mpandu sy ny vadiny mama Nkenge Lufuma izany. Tonga teny an-tanety niaraka tamin'ny kalesin'afo teo amin'ny lembalemban'i Etiopia izy ireo. Avy amin'ity mpivady ity no hiteraka roa ambin'ny folo zaza, izay patriarika roa ambin'ny folo amin'ny hazakazaka mainty. Ireo zanaky ny lanitra roa ambin'ny folo ireo dia hampifangaro ny rany amin'ny zanak'i Tami (mainty), avy any India ary hiteraka mainty lehibe indrindra.
Taorian'ny tondra-drano, Tata Kongo nimi, avy tamin'ny taranak'i Na Lukengo, ny lahimatoa zanak'i ve Nzala Mpandu, Etiopia, dia hanambady Mama Ngunu ka hiteraka telo ankizy izay ny fandinihana ny telo toetran'Andriamanitra lehibe, Mpamorona:
- Nsaku Ne Vunda, Fitiavan'Andriamanitra, izay Mpaminany.
- Ne Mpanzu, ny Manan-tsaina momba ny famoronana, ary mpandrafitra ary mpiady.
- Mama Nzinga dia taratry ny Herin'Andriamanitra ary Mpanjakavavy.
Amin'ny taona 4200 talohan'i JK, hitombo ireo mainty hoditra lehibe ireo ary honina ao Etiopia, Egypt, Nubia, Sahara, Moaba, Kanana ary Midiana.
Nkulu Kenatu dia niady tamin'ny aretina ara-panahy tamin'ny androny ary nifandray tamina razambe Soalire an'arivony razambe: Kinzambi kia Kongo. Avy eo dia nialokaloka tao Etiopi ilay Bena Kôngo henjehina tsy nivadika tamin'i Falao Kenatu.
Tamin'ny taona 960 al.f.i., Mpanjakavavy Makenda Saba (= Makeda) avy amin'ny Foko Bena Kôngo dia nanambady an'i Solomon Mpanjakan'ny Isiraely. Ity fanambadiana ity dia namporisika ny fifindra-monina Bakongo maro izay tonga honina an-kalalahana any Israel. Ny Vahoaka Falasha (= Betha Israel) dia vokatry ny fanambadian'ny zanaky ny fianakavian'i Bena Kôngo sy ny zanaky ny fianakavian'i Bena Israel.
Ny BUKONGO dia nilaza izao momba ny FALASHA: Rehefa nanambady an'i Solomon of the king of Jerusalem (BENA ISRAEL) ny Mpanjakavavy Makenda Saba (BENA KONGO) ... Nipetraka tao Jerosalema i BENA KONGO izay nanambady vehivavy avy tamin'ny fianakavian'i BENA ISRAEL niteraka ny vahoaka. antsoina hoe FALASHA (BETHA ISRAEL)… Ny firenena tokana nanirahana ny Kristianisma Primitive dia i Etiopia izay nipetrahan'ny teraky ny Mpanjaka Solomon niaraka tamin'ny Mpanjakavavy Mankenda Saba. Ankoatra an'i Etiopia, ny Kristianisma dia nandeha nizotra nankany Andrefana izay nijanona tao nandritra ny taonjato maro. Izany no antony mahatonga ny fiangonana kristiana orthodoksa etiopiana ho iray amin'ireo fiangonana kristiana tranainy indrindra atsy Afrika.
Izany no nahatonga ny vahoaka israeliana naka ilay Kintana enina enina an'ny Pëuple Bena Kôngo satria tany am-boalohany ny mari-pamantarana masin'ny olon'ny Isiraely dia ny labozia fito (ny Menorah).
Izany no mahatonga ny fitenin'ny hebreo Kikongo Pure forme ohatra: ny Nabi lasa Rabi, Yakubu lasa Yacob, Masa lasa Moshe, Elima lasa Elohim, Dikahala lasa Kahal, Ne Melekisedeki lasa Melshiseq, Kanana is lasa Kanana, lasa Jerosalema i Jerosalema, sns ...
Raha tokony hianatra latin, hebreo dia Pure Kikongo fa tokony hianarin'ny Eveka afrikanina, eoropeana ary amerikana ary hohalalina. Ilay iray Master ao Bukôngo dia mahatakatra ny Baiboly lalina tsy fantatry ny Mpitandrina Mpitandrina. Satria ny lakilen'ny Baiboly dia ao amin'ny Bukôngo, sy amin'ny fiteny Kikongo. Grand Nabi Kôngo dia afaka manaitra izao tontolo izao. Saingy tsy omen'ny Muela Kongo alalana izahay hanoratra, amin'ny fotoana rehetra, ny zavatra rehetra fantatray. Ny zava-drehetra amin'ny fotoany.
Ny Semites tany am-boalohany dia avy amin'ny hazakazaka mainty satria izy ireo dia taranaky ny Razambe Na Nsemi. Na Nsemi no lahimatoan'i Na Lukengo.Na Lukengo no lahimatoan'ny razamben'ny hazakazaka mainty voalohany: Na Nzala Mpandu sy Mama Nkenge Lufuma.
Fantatrao ve fa i Na Nzala Mpandu sy i Mama Nkenge Lufuma dia avy amin'ny kintana mamiratra Kakongo. Tonga tany amin'ny planeta Tany tamin'ny Kumbi dia Tiya (= kalesy afo) izy ireo ary tonga tany Etiopia. Andao hikatona io fononteny io.
Ny Hebreo dia nanadio ny Fivavahan'ny Semita Mainty ary ny Nabi Kôngo Lehibe nilaza hoe: "Hitanareo fa ny zavatra izay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny Baiboliny dia tsy avy tamin'Andriamanitry ny Isiraely, fa avy amin'ny zavatra nianarany avy tamin'ny Nabi Kôngo Lehibe an'i Egypta taloha sy ny tanin'i Midiani. Ity ny Tenin'i Doei an'ny Kristiana! Tena Tenin'ilay Nabi Kôngo Lehibe… Ingeta! Ibobo, Ibobo, Ibobo!
Tamin'ny taona 220 talohan'i JK, nandritra ny fihenan'ny sivilizasiôna egyptiana lehibe dia niseho tamin'i Ne Mbemba Zulu i Arkanjely Ne Muanda Kongo ary nilaza taminy hoe:
Noho ny fikorontanan'ny firenena, ary mandra-pahatongan'ny fotoana efa hitan'i Yaav Muanda Kongo, dia manomboka izao dia hahalala anao amin'ny anarako ny firenena. Ianao no Beni Kongo, ilay Bena Kongo! Handao ny avaratra ho any atsimo ianao, ary ny loha ho an'ny fo. Hanafina ny zava-miafin'ny lalàna masina ao anaty lava-bato ao am-pon'ny tanin'ny masoandro Sirius (KATIOPA, Afrika) ianao ary hanafina ny roa ambin'ny folo amin'ny telo.
Rehefa manova ny fomban-drazana masina, izay ho azy Black, ho an'ny fomban-drazana fotsy, ireo vahoaka barbarin 'ny haizina, dia handao ity sakafo matsiro izay nozakainy. Ary avy eo dia ho tonga ny fanekempihavanana vaovao ...
Ianao no firenena voafidy hanompo ahy. Ny razambenao voalohany dia avy any an-danitra, avy eny amin'ny habakabaka, fa ianao kosa teraka tany Etiopia. Avy tany Etiopia no nitondrako anao ho any Egypta. Ary ankehitriny Izaho dia mitondra anao mivoaka avy any Egypta ary mandefa anao mihoatra ny tanànan'i Etiopia, ho lohany sy ho fon'ity faritra lehibe ity, izay manomboka amin'ny Ranomasin'i Kalunga ka hatrany amin'ny loharano Neily.
Handeha ianao ka honina ao amin'ny tanin'ity mpanjaka lehibe ity, ilay Mani Kongo lehibe izay avy any an-danitra, avy amin'ny habakabaka. Eto no hahatanteraka ny faminaniana.
Fa raha ny marina, hoy ny Tompo: raha ny zanaky ny tontolon'ny maizina dia mivily hanalavitra an'izao tontolo izao amin'ny lala-mahitsy, ny hazavana izay hanarenana izao tontolo izao dia avy amin'i Kongo dia Ntotela, amin'ny fotoana hitan'ny Tompo mialoha ny Kintan'ny teny fikasana ho tonga any Kongo Central. "
Noho izany, eo ambany torolàlana mazava an'i Mbemba Zulu, ny Bena Kongo an'ny Sahara, Kanana, Midiana, Moaba, Nubia, ary Egypt dia hivondrona ao Etiopia ary hanomboka ny fifindra-monina lehibe izay hitarika azy ireo mankany amin'ny tsy fantatra, ny tany nampanantenaina. Ny Bena Kongo dia handao an'i Etiopia amin'ny làlan'i Tanganika ary hahatratra ny Zimbaboe amin'izao fotoana izao eo ambany fitarihan'ny razambe Isanusi; hanangana sivilizasiona lehibe any izy ireo.
Taorian'ny fihenan'ny sivilizasion'i Zimbaboeana, i Mama Mbangala no hitarika ny vahoaka kongo.
Niampita ny tany efitra Kalahari teo ambanin'ny fanadiovana lehibe, ireo Bena Kongo rehetra izay nanao ratsy sy nanota tany Zimbambue, dia matin'ny varatra sy varatra. Taranaka vaovao Bena Kongo dia hateraka avy any an'efitra Kalahari ary hiditra ny tanin'ny Tany Nampanantenaina. Mandritra ity dia ity, ny sisin'i Bena Kongo no ho very lalana ary hiana hianatsimo. Avy amin'io fangejana io no hipoiran'ny vahoaka Zulu ao Afrika Atsimo.
Amin'ny taona 320 amin'ny androntsika, ny Bena Kongo dia hiampita ny renirano Kunene ary hibodo ny faritra voalohany amin'ny Tany Nampanantenaina eo ambany fitarihan'ny Ne Nsansukulu ao Kanda. Nataon'izy ireo batemy ity faritany voalohany an'ny firenena ity, Kongo dia Mpangala noho ny hafanana be avy amin'ity faritra ity. Ny renivohitra voalohany dia natsangana tao Kimpemba.
Tamin'ny taona 420, tamin'ny vanim-potoanan'ny trondro, teo ambany fitarihan'ny Ne Kodi Puanga, ny Bena Kongo dia naka ny tanin'ny faritany faharoa tamin'ny firenena tamin'ny anarana hoe Kongo dia Kuimba na Kongo dia Mulaza ary ny renivohitra dia nifindra tany Kahemba ary avy eo nankany Feshi, any amin'ny faritr'i Bandundu ankehitriny.
Amin'ny taona 529 amin'ny vanim-potoana iainantsika, ny Bena Kongo dia hiampita ny reniranon'i Muanza ary hibodo ny faritany fahatelo amin'ny firenena antsoina hoe Kongo dia Luangu na Kongo dia Mpanzu, ho fahatsiarovana ilay mpandrafitra razana. Nentina niverina tany Zimba tao Manianga ankehitriny ny renivohitra. Aorian'ny fiakarana Ne Nsengele Mbele, ny Bena kongo dia hanaraka ny reniranon'i Muanza ary hiampita azy amin'ny Nsanda Nzondo.
Ao amin'ny 690 AD, eo ambany fitarihan'ny Mpaminany Kulunsi manazava, ny Bena Kongo dia hahatratra ny tendrombohitra masina antsoina hoe Mountain of Lemba, Mountain of Nkumb'awungudi, Mountain of Nkayila, ary antsoina koa hoe Mountain of Kongo dia Ntotela.
Alohan'ny hiakarany io tendrombohitra io, ny Bena Congo dia hijanona mandritra ny efapolo andro any ambany faritry ny tendrombohitra mba hanadio ny tenany.
Ary farany, ny Mpisoronabe Nkembo Wamonesua sy ny roa ambin'ny folo lahy dia niakatra teo an-tampon'ny tendrombohitra masina.
Ny arkanjely Ne Muanda Kongo dia nidina tao amin'ny endrika masoandro mamirapiratra ary nanitsaka ny tongony tamin'ny tany ambanin'ny Tendrombohitra Masina. Voromahery goavambe sivy no nanidina teny ambonin'ny Tendrombohitra tamin'io andro io, nisy kotrokorana, niseho ny avana teny an-tendrombohitra ary ny kintana fampanantena, tamin'ny teboka enina dia nifikitra tamin'ny avana . Nisy oram-be nilatsaka tany amin'ny fanambanin'ny Tendrombohitra ho fitahiana ho an'ny olona.
Ireo Bena Kongo, izay nandohalika sy nijoro teny an-kianja, nianianany hanompo ny Andriamanitsika tokana, nanome azy ny fianianany amin'ny tsy fivadihana amin'ity fe-potoana ity:
Hanompo an'i Ne Muanda Kongo araka ny sitra-pony isika. Hotazominay ny firenena kôngo an'i Ne Muanda Kongo araka ny niriany. Handefa ny hazavan'i Ne Muanda Kongo manerana an'izao tontolo izao izahay araka ny faniriany. Hifantoka amin'ny fifehezana sy amin'ny famonjena ny hafa izahay. Hanohy ny tolon'ny fivoarana sy ny fandriam-pahalemana ary amin'ny hazavan'ny fo isika. Hanohy hitazona ny hevitsika amin'ny mazava izahay. "
Ny arkanjely Ne Muanda Kongo dia nanome vato masina an'i Ne Nkembo Wamonesua, nantsoina hoe Lusunzi na Makongo, ary ireo lalàna izay tokony hitantana ny firenena vao avy nolovany tamintsika ary nilaza hoe: Kongo Tadi, kabasu'e mbansinga (The Kongo is Iray ary tsy azo zahana). Izy dia mitahy ny Bena Kongo sy ny faritany telo Kongo. Io tendrombohitra masina io no hanorenan'i Bena Kongo ny renivohitra farany hataon'izy ireo hatao batemy Mbanza Kongo, Mbanza Lemba, Mbanza Nkamba, Mbanza Ngemba, Mbanza Yenge. Ary ireo anarana rehetra ireo dia midika hoe tanànan'ny fiadanana.
Manomboka amin'i Mbanza Kongo, ny Bena Kongo dia hihamaro, hiparitaka ary hipaka ny faritra izay manomboka amin'ny renirano Kunene (atsimon'ny Angola ankehitriny) ka hatrany amin'ny ony Ogue (any Gabon), ary ny ranomasina Atlantika hatrany amin'ny Farihy Mandombe (Mai Ndombe) any Bandundu. Fanjakan'i Kongo io.
Tamin'ny 1482 dia tonga tany Kongo ny Portiogey Diego Cao; ary ny 03 May 1491 dia natao Batemy tamin'ny katolika ny Mpanjaka Nzinga Nkuwu. Fanombohan'ny fanandevozana izany.
Trano ambin'ny folo tapitrisa Bakongo no nentina toy ny sardines tsy nisy fanjohian-kevitr'olombelona tany Etazonia, Brezila, Haiti, Kiobà, Santo Domingo, Jamaika, Guadeloupe sns ...
Tamin'ny taona 1822, taorian'ny fikomiana nataon'ny Mainty tany Etazonia sy tany Brezila, dia nisy mainty hoditra marobe, izay misy ampahany kely amin'ny Bakongo, naverina tany Afrika ary hamorona an'i Liberia sy Sierra Leone. Any Liberia dia hamory indray ny Bakongo ary hanangana distrika iray izay hantsoin'izy ireo hoe Kongo (ao Kikongo = Mbanza Kongo).
Amin'ny taona 1885, ny kaonferansa Berlin dia handray anjara bebe kokoa amin'ny fanakorontanana ny kaontinanta afrikanina. Tsy ho afa-bela ny Fanjakan'i Kongo, hizara telo lehibe amin'ny sisin-tany tsy misy dikany, amin'ny anarana Kongo Français, Kongo Belge ary Kongo Portiogey. Ny Bakongo, mpirahalahy ra, dia hosarahina amin'ny sandry mahery ary hihevi-tena ho olon-tsy fantatra amin'ny tanin'ny razany avy eo.
Izany no hanarahan'ny hetsi-panoherana ara-tsosialy, hetsika ara-pinoana sy ara-pinoana ao amin'ireo Kongo telo. Mama MAfuta, Mama Vita Kimpa (1702), Ne Buta (1910), Ne Mbianda Ngunga (1914), Mfumu Kimbangu (1921), Mbuta Mbumba (1921), Mbuta Matsua (1926), Mbuta Matai (1933), Mbuta Mpadi ( 1939). Niady ho amin'ny fanafahana an'i Bakongo sy ilay mainty hoditra izy rehetra. Saingy nosamborin'ny herin'ny fanjanahan-tany izy ireo, natsipy tany am-ponja ary novonoina.
Niomana nandritra ny fotoana fohy tamin'ireny hetsika ara-panahy ireny, tany am-piandohan'ny taona 1950, ny tanora kôngo dia nandamina ny tenany tao anatin'ny hetsiky ny kolontsaina kôngo nanao politika, nitaky fahaleovan-tena tsy nisy fepetra tao amin'ireo Kongo telo.
Fotoana fohy taorian'ny fahombiazan'ny tolona maherifon'izy ireo dia niongana izy rehetra, nesoesoina ary nosoloin'ireo saribakoly, izay namadika ny mponina tao Afrika Afovoany ary nandiso fanantenana ilay lehilahy mainty ...
Ny Herin'ny finiavana - Wayne Dyer (Audio)
Sundjata, ny safo-drano na ny niandohan'ny isa
Ny antso nataon'ny Dalai Lama ho an'ny tanora (Audio)